Caqabadaha Is-weydaarsiga Suuqgeynta ee Suuqleyda, Dadka wax Iibiya, iyo Maamulayaasha Guud (Xog + Talo) | Martech Zone
Qalabaynta Suuqgeynta waxaa isticmaalay shirkado waaweyn tan iyo markii ay nolosha soo gashay. Dhacdadani waxay calaamado ku yeelatay tikniyoolajiyada suuq-geynta siyaabo dhowr ah. Xalalkii hore waxay ahaayeen (intabadanna wali) waa kuwo adag, muuqaalkoodu hodan yahay, oo sidaas awgeedna ay adagyihiin oo qaali yihiin Kuwaas oo dhan waxay ku adkeeyeen shirkadaha yaryar inay hirgeliyaan otomatiga suuq geynta. Xitaa haddii ganacsi yar awoodi karo software-ka otomaatigga suuqgeynta waxay ku adag tahay inay ka helaan qiimo run ah.
Isbeddelkani wuu i dhibay maxaa yeelay ganacsiyada yaryar ee leh awood yar ayaa runtii ka faa'iidi kara isticmaalka otomaatiga suuqgeynta. Kabaallaynta otomaatiga waxay kordhin kartaa waxsoosaarka sidaas darteedna dakhli badan. Nasiib darrose, xalalka hadda jira badankood looma qorsheynin ganacsiyada yaryar.
Marka, suuq ahaan iimaylka shirkadda SaaS ee suuqgeynta iimaylka, waxaan dareemay inay ahayd waajibkeyga inaan ogaado waxyaabaha suuqleydu ku adag tahay. Taas waxaan ku sameeyay anigoo sahaminaya in ka badan 130 xirfadlayaal ka shaqeeya suuqgeynta.
Laakiin waxaan dareemay inaysan taasi ku filnayn. Waxaan doonayay inaan la wadaago dhammaan aragtidan iyo xogtaan sidaa darteed waxaan sameeyay a maqaal wareeg ah oo qoray an warbixin 55-bog ah oo xog buuxsan si aan adduunka ula wadaago wixii iga soo baxay. Maqaalkani wuxuu muujinayaa qaar ka mid ah natiijooyinka muhiimka ah iyo xogta warbixinta. Intaa waxaa dheer, waxaan gacanta ku qaatay tallada otomaatigga suuqgeynta ugu fiican ee ay bixiyeen khubaro intii aan cilmi baarista waday.
Guudmarka Warbixinta Caqabadaha Suuqgeynta
Aynu wax yar ka hadalno qaybinta tirada shirkadaha, jagooyinka jawaabeyaasha iyo warshadaha ay ka shaqeeyaan. Tani waxay geyn doontaa dhammaan xogta soo socota macnaha guud.
Qiyaasta Shirkadda - Daraasaddayda, 90% jawaabeyaasha waxay ka yimaadeen shirkadaha leh 50 shaqaale ama ka yar. Tani waxay ka dhigan tahay in ganacsiyada yaryar iyo kuwa yaryarba ay aad u matalaan. Aan yara jabino tan. In ka badan kalabar jawaabeyaasha (57%) waxay ka shaqeeyaan shirkadaha leh 2-10 shaqaale ah. Shan meelood meel (20%) jawaabaha waxay ka yimaadeen shirkadaha leh 11-50 shaqaale. 17 gudbinta (13%) waxay ka yimaadeen solopreneurs.
Jagooyinka - Soo gudbinta ugu badan (38%) waxay ka timid xirfadlayaal ka shaqeeya jagooyinka Kobaca sida Suuqgeynta iyo Iibinta. 31% jawaabeyaasha sahankayagu waa milkiileyaal ganacsi. Rubuc ka mid ah kaqeybgalayaasha (25%) waa agaasimeyaal guud. Saddexdaan kooxood waxay qaataan 94% gudbinta.
Warshadaha - Qeybinta warshadaha ee jawaabeyaasha ayaa u janjeera dhanka Suuqgeynta, iyadoo leh 47%. Tani waxay ahayd mid ula kac ah markii aan ururinay xogta si qiyaastii kala bar jawaabeyaashu ay uga yimaadaan warshadaha suuqgeynta. Warshadaha horumarinta softiweerka ayaa galay kaalinta labaad ee sahanka, iyadoo 25% soo gudbinta ay ka timid warshadani.
Dhammaan xogtan casiir leh waa wax weyn, laakiin waxaad halkan u timid inaad ka akhrisato caqabadaha ku saabsan suuqgeynta suuqgeynta, miyaadan ahayn? Marka aan u nimaadno!
Caqabadaha Suuqgeynta ugu Weyn
Daraasaddeenna, 85% jawaabeyaasha waxay adeegsadaan nooc ka mid ah otomaatiga suuq geynta.
Caqabada ugu badan ee dadku la kulmaan otomaatiga suuq geynta ayaa waxay abuureysaa otomaatiyaal tayo leh, iyadoo 16% jawaabeyaasha ay xusayaan
Iyada oo ku saleysan xogtayada, isku dhafka (14%) waa caqabad kale oo muhiim ah oo dadka isticmaala ay la kulmaan tikniyoolajiyadda otomatiga ee suuqgeynta.
Qalabaynta suuqgeynta waxay u baahan tahay waxyaabo badan. Layaab ma leh, in abuurista nuxurka ay soo gashay kaalinta saddexaad, iyadoo leh 10%.
Kaqeybgalka (8%) waa caqabad kale oo weyn waxayna xiriir dhow la leedahay waxa ku jira. Otomaatiggu wuxuu u baahan yahay waxyaabo tayo sare leh si loo kaxeeyo hawlgelinta.
Qaybinta, maareynta xogta, iyo hagaajinta ayaa lagu sheegay 6% kaqeybgalayaashu inay yihiin caqabado otomatig suuq geyn ah.
Raadinta qalab (5%), shaqsiyeyn (5%), dhibcaha hogaanka (5%), falanqaynta (4%), warbixinta (3%), iyo gudbinta (1%) dhamaantood waxay ku tilmaameen inay caqabad ku yihiin qaar ka mid ah xirfadlayaasha la daraaseeyay .
Imaatinka, waxaan eegeynaa sida ay caqabadahaani ugu kala duwan yihiin labada qaybood ee kala ah: Kobaca (Suuqgeynta & Iibinta) iyo Agaasimayaasha guud.
Caqabadaha Is-weydaarsiga Suuqgeynta Dadka Jooga Koboca
Xirfadleyda ugu caansan ee suuqgeynta iyo iibinta xirfadleyda leh ayaa abuuraya otomaatig (29%), oo aad u sarreeya
Isdhexgalka ayaa ah xirfadle kale oo caqabad weyn ku ah boosaska koritaanka ay la kulmaan otomaatiga suuq geynta, iyadoo 21% jawaabeyaasha ay tilmaameen.
Abuuritaanka nuxurka ayaa soo galay kaalinta saddexaad iyadoo 17% ka mid ah xirfadlayaasha koritaanka ay sheegaan.
Qeybinta waxaa keenay 13% jawaabeyaasha ka yimid boosaska koritaanka.
Maareynta xogta iyo dhibcaha hogaanka ayaa lagu tilmaamay inay yihiin caqabado 10% kaqeybgalayaasha.
Caqabadaha kale ee aan sida aadka ah loo xusin waxaa ka mid ah: shaqsiyeynta (6%), iswaafajinta (6%), hawlgelinta (4%), helitaanka qalab (4%), gorfaynta (4%), iyo warbixinta (2%).
Caqabadaha Is-beddelka Suuqgeynta ee Agaasimayaasha Guud
Kakanaanta qalabeynta otomaatiga suuq geynta ayaa ah caqabada koowaad ee agaasimeyaasha guud, iyadoo 21% kaqeybgalayaasha boosaskaan ay keeneen
Shirkadaha yar yar iyo kuwa yaryar, badiyaa waa agaasimaha guud ee go'aamiya isku darka barnaamijyada ay shirkaddu isticmaasho. Marka, layaab malahan in isku dhafka (17%) iyo helitaanka aaladaha (14%) ay yihiin caqabado muhiim u ah iyaga.
Kaqeybgalka wadista farriimaha suuqgeynta otomaatigga ah waxaa lagu tilmaamay inay caqabad ku yihiin 14% ee Agaasimayaasha guud.
Abuuritaanka otomaatiga (10%) ayaa si aad ah uga hooseeya agaasimayaasha guud marka loo eego xirfadleyda koritaanka iyo milkiilayaasha ganacsiga. Sababta tan ayaa ah in agaasimayaasha guud badankood aysan wax ka qaban sameynta otomaatiyada.
Maareynta xogta iyo hagaajinta labadaba waxaa keenay 10% jawaab bixiyaasha doorka agaasimaha guud.
Qaar ka mid ah caqabadaha aan badanaa la soo sheegin ee Agaasimayaasha guud waxay abuurayaan nuxur, shaqsiyeyn, kala soocid, warbixinno, iyo falanqeyn, mid kasta oo ka mid ah wuxuu u muuqday jawaabaha 7%.
La-talin otomaatig ah oo Suuqgeyn ah oo ka socota Khuburo iyo Saameyn
Sidaan soo sheegay waxaan sidoo kale waydiinay dadka isticmaala otomaatiga suuq geynta
“Maxaad ku dhihi laheyd qof hada ku bilaabay otomaatiga suuq geynta? Muxuu isaga ama iyadu ahmiyad siinayaan? ”.
Waxaan xushay qaar ka mid ah jawaabihii ugu fiicnaa, waad ka akhrisan kartaa dhammaan xigashooyinka wareeggan.
SaaS guru iyo Aasaasaha SaaS Mantra, Sampath S wuxuu leeyahay markay timaado suuqgeynta otomaatigga suuqgeynta waa inay diirada saaraan:
Ryan Bonnici, CMO ee G2Crowd sidoo kale wuxuu la wadaagay talooyin tilmaameyaal cabsi leh oo suuqyadu ay tahay inay fiiro gaar ah u yeeshaan bilowga:
Aasaasaha Ghacklabs, Luke Fitzpatrick wuxuu iftiiminayaa muhiimada taabashada aadanaha ee otomaatiga suuqgeynta:
Nix Eniego, Madaxa Suuqgeynta ee 'Sprout Solutions' ayaa kula talineysa kuwa bilowga otomatiga ah ee suuq geynta inay diirada saaraan miraha hooseeya iyo horumarinta qaab dhismeedka guud ka hor inta aysan u boodin nitty-gritty
Aynu dib u milicsanno caqabadaha ugu waaweyn. Marka ay timaado suuqgeynta isticmaaleyaasha otomaatiga ee jagooyinka koritaanka caqabadaha ugu waaweyn ee ay qabaan waa:
Dhinaca kale, Maamulayaasha guud ee la shaqeeya otomaatiga suuq geynta way ku adagtahay:
Tags: abuurista otomaatiyada suuq geyntasuuq-geynta suuqacaqabadaha suuqgeynta suuqgeyntakakanaanta qalabka suuqgeyntasuuq geynta waxyaabaha otomaatiga ahabuurista otomaatiga suuqgeyntaisdhexgalka otomaatiga suuq geyntasuuqgeynta qalabka isgaarsiintaqalabyada suuq-geynta suuqa